Le Cine Club - INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE | INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
Home » Le Cine Club - INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
A place for French Movie Lovers…
Every Monday at IFB | 7:30 PM
Films are in original language with subtitles in English. Free entrance.
Screenings will start at 7:30PM (Lecture room).
Pour les cinéphiles et les amoureux du cinéma, l’IFB propose chaque lundi un film français, italien ou espagnol à découvrir.
En partenariat avec l’Ambassade d’Espagne à Rangoun.
Chaque lundi, à l’IFB | 19h | Salle de conférence en haut
ရုပ်ရှင်ချစ်သူများအတွက် နွေးထွေးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော လက်တင် တင်္နလာနေ့ ရုပ်ရှင်ရုံ လေးကို ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာ ပြင်သစ်၊ အီတာလီ၊ စပိန် ရုပ်ရှင်များကို အတူတကွ ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ထားပါတယ်။
IDကဒ်ကို IFB အ၀င်ဝမှာပြသရပါမယ်။ တင်္နလာနေ့တိုင်း | ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဋ္ဌာန | ည၈နာရီ | အပေါ်ထပ် အစည်းအဝေးခန်း
ရုပ်ရှင်ကား အားလုံးကို မူရင်းဘာသာစကားများဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး ပြသပါမယ်။
2 Nov, Monday
Presented by IFB
Henri isayoung actor who dreams of playing in Fast & Furious but who finds himself cast inamovie by the legendary independent filmmaker Cédric Rovère. Even if the conditions during the shoot aren’t quite what Henri expected,Continue Reading
Presented by Embassy of Spain in Yangon
Jorge isa25-year old janitor who desperately tries to find himselfanew, and especially, better, job. This undertaking is complicated by the fact he takes care of his handicapped father who hadahart infarct seven years earlier. His soon-to-be-released brother Antonio findsagirlfriend (Paula) in jail who wants to get pregnant Continue Reading
Young extrovert Baya Benmahmoud ( Sara Forestier) lives by this classic motto: “Make love, not war.” In order to convert them to her cause, she sleeps with her political enemies – which meansalot of men, because every conservative is her enemy Continue Reading
အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် တင်္နလာနေ့
Bueno Aires မြို့ နေ Roberto က အထီးကျန် တဲ့ ကုန်မာ ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Roberto က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ထူးဆန်းတဲ့ သတင်းတွေစုပြီး အယ်လ်ဘမ် တစ်ခုပြုလုပ်ရတာသူ့ဝါသနာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ Mari က တော့ သူ့အပေါ်မှာ တစ်ဖက်သက်မေတ္တာသက်ဝင်နေသူပါ။ ဒါပေမဲ့Roberto ကတော့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေကျပေါ့။ တစ်ရက်မှာတော့ သူလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပျံတွေ မြေပေါ်ဆင်းတာကို ကြည့်နေတုန်း တရုတ်လူမျိုး Jun ဆိုတဲ့သူ တက်စီပေါ်က တွန်းချခံခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ပြီး Roberto ကသူ့ကို ထလို့ရအောင်ထူပေးလိုက်တယ် Continue Reading
5 Oct screening – Premiere!
ပြင်သစ်ရုပ်ရှင် (IFB မှစီစဉ်တင်ဆက်မှု)
လက်တင်တင်္နလာနေ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ အချစ်သီချင်းများ (Les Chansons d’amour) ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိသော ပြင်သစ်တေးသရုပ်ဖော် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Christophe Honoré ကရိုက်ကူးထားပြီး Louis Garrel, Ludivine Sagnier,Clotilde Hesme နှင့် Chiara Mastroianni တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။